Nandrolone အမှုန့် (434-22-0) hplc≥98% | AASraw steroids အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / Nandrolone အမှုန့်စီးရီး / Nandrolone အမှုန့်
3.50 ထဲက5အခြေခံ2ဖောက်သည် ratings
SKU: 434-22-0. Categories: Nandrolone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Nandrolone မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (434-22-0) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Nandrolone အမှုန့် ဇာတ်ကောင်
အမည်: Nandrolone အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 120-125 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Nandrolone အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
Deca-Durabolin ဟာဟို Steroid တစ်မျိုး Nandrolone အမှုန့်များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသ Deca-Durabolin Nandrolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့် Decanoate များအတွက်ကုန်သွယ်မှုနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Nandrolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်တစ်ဦးဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အခြို့သောတစ်ရှူးများ၏ကြီးထွားမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ဟေမိုဂလိုဘင်များနှင့်သွေးနီဆဲလ်၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အသွေးအောက်စီဂျင်သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတိုးတက်စေရန်ပြသလျက်ရှိသည်။
လျှင် Nandrolone အမှုန့်မသုံးပါနဲ့:
သငျသညျ Nandrolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ထဲမှာမဆိုပါဝင်ပစ္စည်းမှမတည့်ဖြစ်ကြ
သငျသညျဆီးကျိတ်ကင်ဆာသို့မဟုတ်ရင်သားကင်ဆာ, မြင့်မားသောကယ်လစီယမ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူရင်သားကင်ဆာ, ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုရှိ
Nandrolone အမှုန့်အသည်းနှင့်သရက်ရွက်ထဲမှာအသည်းကင်ဆာသို့မဟုတ်သွေးထွက်သံယို cyst ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဖြစ်ပေါ်လျှင်သင် Nandrolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယူပြီးရပ်တန့်တခါ, သူတို့ကများသောအားဖြင့်သွားပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျပွငျးထနျ, ဖြစ်နိုင်သည်အသက်အန္တရာယ်သွေးထွက်ဝမ်းဗိုက်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်သည်အထိသင်တို့သည်ဤကင်ဆာသို့မဟုတ် cyst ၏တဦးတည်းရှိသည်မသိပေမည်။
Nandrolone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုလည်းကောင်းသောလက်စထရော (HDL) မှာတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆိုးလက်စထရော (LDL) တွင်တစ်ခုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။ လက်စထရောလ်တွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုပြင်းထန်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်လေးလေးနက်နက်သွေးလွှတ်ကြောများ၏တင်းမာနှင့်နှလုံးရောဂါဖွံ့ဖြိုးဆဲသင့်ရဲ့စွန့်စားမှုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။
AASraw ထံမှ Nandrolone အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
/ nandrolone အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတွက်အသုံးပြု nandrolone အမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
testosterone Acetate အမှုန့်